Axsaabta Somaliland oo kukala aragti duwan kulanka Jabuuti - Tilmaan Media
Axsaabta Somaliland oo kukala aragti duwan kulanka Jabuuti
Waxaa la filayaa in kulan heersare ah uu oga bilawdo maalinka barri ah madaxda Dowladda Federaalka Soomaliya iyo kuwa Somaliland magaalada Jabuuti.
Kulankan ayaa waxaa Dowladda Federaalka Soomaaliya ku matalaya madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Raysalwasaare Xassan Cali Khayre iyo Gudoomiya golaha shacabka Maxamed Mursal. Dhanka Soomaaliland waxaa lafilayaa in waftiga kasocda uu hogaamin doono madaxwaynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Madaxwaynaha Soomaaliland oo kulan laqaatay axsaabta mucaaradka ayaa oga warbixiyay kulanka lagu wado in uu layeesho madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Axsaabta mucaaradka ayaa arintan ku kala qaybsamay, gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa isagu qaba in aysan sax ahayn in xilligan kulan lala yeesho madxda dowladda Soomaaliya.
“Aniga jeermaan ahaan mawqifkaygu waxa weeyi horena waan uga soo horjeeday horena waan u sheegay in aan kulankaasi aanu maanta meesha qaban, wakhtigeediina aanu ahayn. Dawladda Soomaaliya ee maanta lala kulmayaana aanay ahayn dawlad mutaysatay in lala kulmo ayaan u arkaa, markaa guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan hase ahaatee dawladda hadda joogta ood ogtahay dhibaatooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo heshiisyadii ay ka baxeen, iyo kii u dambeeyey ee ninkaa arimaha dibada u qaabilsan wixii uu ku hadlayey in la horfadhiistaa waxaan u aragnaa in ay tahay guul darro ku timi Somaliland.” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Dhanka kale xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa soo dhaweeyay kulanka lafilayo in uu Jabuuti kadhaco.
“Wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya maanta may bilaabin. Laba kun iyo koobiyo tobankii xukuumaddii aan ka midka ahaa ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa bilowday. Waxaana isku waafaqay goleyaasha qaranka Somaliland, hadday noqdaan kuwa xeer dejinta iyo fulinta, golaha dhaqanka xisbiyada qaranku horena waa uga qayb qaateen waana Idhoosgareeyeen arintaa iyada ah way waafaqeen. Waxaanu u aragnaa wax kasta oo danta qaranka Somaliland lagu raadinayo iyo gole kasta oo danta qarana Somaliland laga raadinayo in laga qayb galo. Maandhaytkaa waxaa iska leh xukuumada marba markaa joogta, iyadaana laga rabaa hawshaa iyada ah cidii ay kala maarmi weydo ay u yeedhato oo ay waydiiso wixii talo ah ee ay waydiinayso iyada oo ilaalinaysa xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaal” ayuu yidhi gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga Waddani, Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo BBC-da la hadlay.
Sikata oo ay noqotaba waxaa laga dhawrsugayaa natiijada kasoo baxda kulanka Jabuuti ka dhici doona. Waxayna dad badan rumaysan yihiin in uusan ku iman diyaar garaw iyo rabitaan Soomaalida ka timid, ee dabada ka riixayaan dowlado kale sida Maraykanka iyo Itoobiya.
Madaxwaynaha Dowladda Jabuuti oo ka hadlay kulanka bari dalkiisu martigalin doono